Byare January 8, 2018
(Europe) 08 Jan 2018. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa dib u furmay isagoona socon doona bishan oo idil, Waxaan si joogta ah idin kugu soo gudbin doonaa ciyaartoyda la doonayo iyo kuwa lala saxiixday intaba insha’alaah.
Dhaliyaha reer France ee Ateletico Madrid Antoine Griezmann 26-jir ayaa dalban doona mushaar dhan usbuuciiba 400,000 si uu isaga diido Barcelona uguna biro Manchester United. (Sun)
Chelsea ayaa dooneysa in weeraryahanka reer Belgium ee kooxda Borussia Monchengladbach Thorgan Hazard, 24-jir uu Stamford Bridge kula soo biiro walaalihiisa Eden 27-jir iyo Kylian 22-jir. (Bild)
Liverpool ayaa dooneysa in Booska Coutinho ay ku soo buuxiso xiddiga reer France ee kooxda Monaco Thomas Lemar 22-jir waxayna diyaar u tahay inay isku daydo inay taasi dhacdo isla bishan. (Mirror)
Real Madrid ayaa dooneysay inay 177-milyan u bandhigto Coutinho ka hor inta uusan gaarin heshiiskii uu ugu biiray Barcelona 142-milyan . (Mundo Deportivo)
Coutinho ayaa maanta oo Isniin ah Barcelona u mari doona Tijaabada caafimaad waana la soo bandhigi doonaa, laakiin kulankiisii ugu horreeyay ee kooxda waxaa dib u dhigi kara dhaawaca uu qabo. (AS)
Kubbad qaabeeyaha reer Brazil ayaa bixinaya 11.5 milyan oo ku aadan heshiiska uu Barca ugu soo dhaqaaqay. (Times
Liverpool ayaa isku dayi doonta inay Naby Keita keento Afield ka hor suuqa xagaaga waxayna dooneysaa inay beeso dheeri ah ku bixiso xiddig horey ugu iibsanaa si ay 22-jirka kooxda u keento isla bishan Janaayo. (Telegraph)
Bartilmaameedka ugu sarreeya Real Madrid ee suuqa Janaayo ayaa noqon doona labo laacib oo ka tirsan Chelsea misane u wada dhashay dalka Belgium, Xiddiga garabka weerarka ka ciyaara ee Eden Hazard 27-jir iyo Goolhaye Thibaut Courtois, 25-jir, laakiin waxay sugi doonaan xaalada weeraryahanka reer England ee kooxda Tottenham Harry Kane 24-jir kaa oo waqti dheer bartilmaameed u ahaa kooxda reer Spain. (Sky Sports)
Xiddiga reer Brazil Lucas Moura, 25-jir ayaa doonaya inuu bishan isaga soo tago PSG kuna soo biiro Manchester United. (Telefoot)
Laacibkii hore ee garabka Everton Gerard Deulofeu, 23-jir ayaa u baahan inuu sugto fursadiis Barcelona iyadoo ay jiraan qiyaas fikradeedka in xiddiga reer Spain ay dooneyso Inter Mian sida uu sheegayo maamulaha kooxda ee xiriirada ciyaaraha. (Bein Sports)
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay inaysan kooxdu u dhaweyn inay sameyso wax saxiixyo dheeri ah bishan Janaayo kaddib markii ay la soo saxiixdeen 20-jirka daafaca reer Greek Konstantinos Mavropanos. (Sun)
Bournemouth ayaa lagu wadaa inay la soo saxiixato gooldhaliyaha ugu sarreeya Colchester United xiddiga lagu magacaabo Sammie Szmodics, 22-jir, laacibka qadka dhexe ee reer England ayaa kooxda lagu naaneyso Cherries ugu kici doona 1 milyan oo bound. (Star)
Xiddiga qadka dhexe ee reer Brazil iyo naadiga Shakhtar Donetsk Fred, 24-jir ayaa sheegay inuu wicitaan taleefan ah ka sugayo macallinka Manchester City Pep Guardiola. (GloboEsporte)
Newcastle United ayaa ku rajo wayn inay dhammeystirto heshiiska xiddiga reer Brazil ee kooxda Chelsea Kenedy, 21-jir. (Newcastle Chronicle)
Leicester City ayaa qarka u saaran saxiixeedii ugu horreeyay ee suuqan Janaayo, weeraryahanka reer Mali Fousseni Diabate. Foxes ayaa ogolaatay beeso dhan 1.7 milyan oo bound si ay ula soo wareegto 22-jirka u ciyaara kooxda Gazelec Ajaccio ee heerka labaad ee horyaalka Faransiiska. (Leicester Mercury)
Leeds United ayaa bartilmaameedkeeda sare ee bishan ka dhigatay daafaca garabka bidix ee reer Belgium ee kooxda Club Brugge laacibka lagu magacaabo Laurens de Bock, 25-jir. (Leeds Live)
Ninka ugu dheereeya adduunka balse iminka isaga fariistay orodka ee Usain Bolt, 31-jir ayaa daaha ka rogay inuu bisha Maarso tijaabo u mari doono Borussia Dortmund, laakiin uu maanka ku hayo sidii uu ugu ciyaari lahaa Manchester United. (Express)
"Waan murugaysanahay dhamaanteen" - Marcelo oo si murugo leh uga hadlay barbarihii xalay
Juventus oo ku la soo biirtay Man United tartanka Mesut Ozil